KhabarSamachar | नसा च्यापिँदाको पीडा, उपचार के छ त ?
२०७८ आश्विन १६, शनिबार ११:४४
ढाडको नसा च्यापिने कसरी हुन्छ भनेर शुरुमा जान्नुभन्दा पहिला नसासम्बन्धी जानकारी राख्नुपर्छ । सिनियर कन्सल्टेन्ट न्युरो फिजिसियन डा. इशा ढुंगाना भन्छिन्– ‘नसाको सबैभन्दा बढी समस्या तीन ठाउँमा हुन्छ । एउटा बे्रेनमा, अर्को मेरुदण्डमा अनि तेस्रो पेरिफेरियल नभ्र्समा जसलाई हाँगा नसा पनि भनिन्छ ।’ डा. ढुंगानाका अनुसार ब्रेनको नसामा समस्या आउँदा त्यसभित्रका नसाहरु फुट्ने, ब्लक हुने अनि ट्युमर पनि पलाउन सक्ने हुन्छ । ब्रेनभित्रको इलेक्ट्रिकल करेन्टहरु बिग्रेर टाउको दुख्ने, उल्टी हुने, बेहोस हुने, साथै छारेरोगको समस्या देखिन्छ ।
उनी थप्छिन्– ‘कहिलेकाहीँ यसको असरले हातखुट्टामा झट्का मार्ने, प्यारालाइसिस हुने, हातखुट्टा कमजोर हुने हुन्छ । त्यसको साथै ब्रेनभित्र पनि इन्फेक्सन हुनसक्छ । मेनेन्जाइटिस, इन्सेफलाइटिस, मलेरिया, टिबी आदि रोग लाग्न सक्छ । उमेर बढ्दै गएपछि बे्रनभित्रका नसाहरु विभिन्न कारणले सुक्दै जाने, त्यसमा हुने रसायनको लेभल घटबढ हुँदै जानेजस्ता कारणले न्युरो डिजेनेरिटिभ डिजिजहरु देखिँदै जान्छ ।अर्को भनेको स्पाइनलको समस्या हो । स्पाइनल अर्थात् मेरुदण्ड वा ढाड । डा. इशाका अनुसार यसमा पनि नसाहरुमा इन्फेक्सन हुनसक्छ । स्पाइनमा ट्युमरहरु पलाउन सक्छ । धेरै देखिने भनेको समस्याचाहिँ नसाहरु च्यापिन सक्छ । हाँगा नसाहरु पनि विभिन्न कारणले थिचिने, च्यापिने हुन्छ, जसलाई न्युरोप्याथी भनिन्छ ।
मेरुदण्डलाई अंग्रजीमा स्पाइन भनिन्छ । मेरुदण्डमा जम्मा ३३ वटा हड्डीका टुक्राहरु हुन्छन् । मेरुदण्डको अन्य भागभन्दा ढाड र कम्मरमा अलि बढी समस्या आउँछ । मेरुदण्डको हड्डी लचिलो हुन्छ । यसको बीचबाट नसाहरु गइरहेका हुन्छन् । हाम्रो बसाइको तरिकाले अनि काम गराइले गर्दा दुईवटा हड्डीको बीचमा जुन नरम मासु हुन्छ त्यसले ठाउँ छोड्दै जान्छ । अलि–अलि सर्दै गएर ठ्याक्कै नसाले थिचिदिन्छ । ढाड या कम्मरमा ५ वटा भर्टिब्राहरु हुन्छन् । ती प्रत्येक हड्डीका बीचमा एकप्रकारको तन्तु हुन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा डिस्क भनिन्छ । डिस्कले गर्दा मेरुदण्डको यो भाग लचकदार र ज्यादा चल्न–खुम्चन सक्ने हुन्छ । हामी बस्दा, निहुँरिदा, कम्मर चलाउँदा आदि विभिन्न शारीरिक काम र कसरत गर्दा सबैभन्दा चल्ने मेरुदण्डको भाग यही हो । यस्ता शारीरिक चालले गर्दा कम्मरको मेरुदण्ड क्रमशः खिइँदै जान्छ र त्यसका नसाहरु कमजोर हुँदै डा. ढुंगाना बताउँछिन् । चोटपटक लागेमा या नसा च्यापिएमा यही भागमा बढी असर पर्दछ । मूल नसामा चोटपटक लागेमा त्यसले दुवैपट्टीका हातखुट्टा नचल्ने अथवा प्यारालाइसिस हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।
विशेषतः बाइक चलाउने व्यक्तिलाई यो समस्याले सताएको छ । डा. इशा भन्छिन्– ‘मकहाँ दैनिक यो समस्या लिएर थुप्रै व्यक्ति आउँछन् । अलि उमेर पुगेका जस्तै– ४०–४५ वर्ष कटेकालाई मात्र ढाडको नसा च्यापिने रोग हुन्छ भन्ने जुन सोच थियो, अहिले त्यो छैन । युवापुस्ता पनि यो समस्या उत्तिकै आइरहेको छ । डा इशाका अनुसार नसा च्याँपिदा मुख्यतः नसाको काम अवरुद्ध हुन पुग्ने हुँदा कम्मर दुख्ने, च्यापिएको नसा गएको खुट्टा वा हाततिर दुख्ने, हातखुट्टा निदाउने, झमझमाउने, लाटो हुने, लुलो हुने र बिस्तारै हातखुट्टा तथा ढाड चलाउन नसक्ने, ढाडमा अधिक पीडा हुने, हरेक क्रियाकलाप गर्दा ढाड र हातखुट्टा दुख्ने हुन्छ । यतिसम्म कि राम्ररी सीधा गरी सुत्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्छ । समस्या जटिल भएपछि औँलाहरुमा कमजोरी देखा पर्ने, हातखुट्टा सुक्दै जाने अनि प्यारालाइसिस पनि हुनसक्ने हुन्छ । समस्या अझ जटिल भए दिसापिसाब गर्नमै अवरोध पुग्छ अनि अन्तिममा अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कस्तो छ त उपचार
यो समस्याको प्राकृतिक उपचारमा पूर्ण बेड रेस्टका साथै फिजियोथेरापीका विद्युतीय उपकरणले गरिने उपचार आईएफटी, अल्ट्रासाउन्ड, टेक्सन, तातोको सेकाइ आदि हुन सक्छन् । यसका साथै अकुपन्चर तथा अकुप्रेसरजस्ता चिनियाँ उपचार पद्धतिले पनि यो रोगमा धेरै फाइदा पुग्छ । यी विधिहरुले दुखाइ कम गर्नुका साथै हड्डी, डिस्क र लिगामेन्टको घाउ निको पारी च्यापिएको नसा छुटाउन सहयोग गर्छ । ढाडको मालिस, अकुप्रेसर, कपिङ, अस्टियोपेथी, काइरोप्राक्टिसजस्ता उपचार पद्धतिले दुखाइ कम गराउनुका साथै डिक्सलाई यथास्थानमा जान सहयोग पुर्याउने हुन्छ । दुखाइ कम भएपछि बिरामीलाई ढाडका व्यायाम,योगासनहरु सिकाइन्छ । व्यायामहरु नछुटाइ गर्दा धेरै फाइदा मिल्छ ।कसैलाई नसा च्यापिने समस्यामा अकस्मात् दिसापिसाब रोकिने पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा समयमा उपचार भएन भने बिरामीलाई प्यारालाइसिस हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले जति सक्दो छिटो विज्ञ भेटेर उपचारको बाटो पहिल्याउनुपर्छ ।
के–कस्ता सावधानी अपनाउने
कार्यालय प्रमुखमाथि गरेको दुर्व्यवहारविरूद्ध प्रदेश २ का इन्जिनियरको प्रदर्शन
उद्दार, राहतका लागि २५ करोड दिने सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णय